The Ab Presents Nepal » नेपाल कै प्रसिद्ध मन्दिर बडिकेदार जहाँ जे माग्यो तेहि पूरा हुन्छ । फोटो लाई छोई ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस् मागेकाे वर अवश्य पूरा हुनेछ!
नेपाल कै प्रसिद्ध मन्दिर बडिकेदार जहाँ जे माग्यो तेहि पूरा हुन्छ । फोटो लाई छोई ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस् मागेकाे वर अवश्य पूरा हुनेछ!
काठमाडौं -: नाकै अगाडि ठिङ्ग उभिएजस्तो देखिने अपी र शैपाल हिमालको सेताम्मे चुचुरा । कर्णाली र सेती नदीको दोभानबाट सुसेल्दै आउने सिरसिरे बतास । ना’ङगो आँखाले सहजै देख्न सकिने तराईको समथर भूमि र टाउको तन्काएर हेर्दा भारतको उत्तरप्रदेशको भू–भाग । राइसल्ला र खर्सुका ठूल–ठूला जङ्गल । भुत्केसर, सत्तु जस्ता अमूल्य जडीबुटी र निगालोको झाडीले घे’रिएको त्यही डाँडोको खोँचमा धार्मिक आस्थाको धरोहर हो डोटीको बडिकेदार ।
अग्लो डाँडोबाट यस्ता दृश्य अवलोकन गर्दा कसको पो मन फुरुङ्ग नहोला र ! ,सरर्र बग्ने हावासँगै सल्लाका कुसुम चलमलाउँदा त्यहाँ पुग्नेको मन झनै प्रशन्न हुनेगर्छ । यहाँ पुग्ने जो कोही बडिकेदारको सौन्दर्यमा लिप्त हुने गर्छन् । सधैँ उही र उस्तै प्रकृतिको वातावरण रहने बडिकेदारमा भने हरेक वर्ष दुईपटक धार्मिक मेला लाग्ने गर्छ । फागुनमा पर्ने महाशिवरात्रि र कार्त्तिक बैकुण्ठ चतुर्दशीमा हजारौं तीर्थालुको भी’ड लाग्ने गर्दछ ।
महाशिवरात्रि भन्दा पनि कार्त्तिकको बैकुण्ठ चतुर्दशीमा भव्य मेला लाग्ने र दर्शनार्थीको बढी भी’ड हुने गरेको बडीकेदार मेला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टोपबहादुर चन्दले बताए । उनले भने, त्रयोदशीको राति र चतुर्दशीको दिउँसो बडीकेदारको दर्शन गर्न भारत र तराईबाट थारू समुदायको विशेष आवतजावत हुन्छ अन्य बेलाको भन्दा फागुन चतुर्दशीमा बढी भिड हुन्छ । ,बडिकेदारको दर्शन गरेमा मनोकामना पूरा हुने जनविश्वासका साथ तराईका आदिवासी थारू समुदाय र भारतको उत्तर प्रदेशका विभिन्न ठाउँबाट वर्सेनी कार्त्तिक बैकुण्ठ चतुर्दशीमा हजारौं तीर्थालु यहाँ आउने गर्छन् ।
खोँचमा रहेको बडिकेदार शिलाको दर्शन गर्न पाउनु नै तीर्थालुको मुख्य ध्येय रहने गरेको छ । विभिन्न समुदायका धामी, झाँक्रीले आ– आफ्ना वेषभूषा र बाजागाजासहित सजिएर श्री केदारनाथ बाबाको दर्शन गर्ने र वर्षभरीको भविष्यवाणीसमेत गर्छन् । यो समयमा धामीले आफ्नो दैवीय श’क्ति समेत देखाउने गर्छन् । त्यस्तै मगर जातिले रातभर मादलको तालमा बजाउने मारुनी नाँच र कान्छा कान्छीको नाँचले झनै त्यो ठाउँ मनमोहित हुन्छ । सुदूरपश्चिमकोे चर्चित डेउडा खेलले मेलामा झनै रौनकता छाउने गर्छ ,।
यतिमात्र नभइ तराईबाट थारू समुदायले सात दिन हिँडेर बडीकेदारको दर्शन गर्न आउने गरेको स्थानीयवासी तथा बडीकेदारका भण्डारी हर्कबहादुर बोहराले बताए । उनले भने “मनले मागेको बरदान मिल्ने भएकाले तराईदेखि भारतसम्मका श्र’द्धालु भक्तजन आउँछन र वर मागेर जान्छन् ।,